Maalinta: Sebtember 25, 2017
Dabka oo ku yaal Saldhiga Metro!
Dab ayaa ka kacay xarunta Şirinevler-Ataköy Metro ee ku taal laanta Aksaray-Airport ee Istanbul. Dableyda dab-damiska ayaa soo dhexgalay dabka, deegaanka waxaa la arkaayay inuu qiiq culus daboolayo. Markii qiiqu ka soo kacayo tareenka dhulka hoostiisa, waxaa la sheegaa inuu dabku ka yimi buffet gudaha tareenka dhulka hoostiisa ah. kooxaha [More ...]
KOBIS oo leh dadka lugaynaya maalin kasta 5 kun 400 km ped pedal
Nidaamka KOBİS (Nidaamka Baaskiilada Kocaeli) ee ay hirgeliso Kocaeli Magaalo-Weyne ayaa soo jiidata xiisaha weyn ee muwaadiniinta. Baaskiilada, gaar ahaan ay doorbidaan muwaadiniinta ku hawlan cayaaraha, ayaa sidoo kale loo adeegsadaa gaadiid. Celcelis ahaan 5 kun oo 400 ah maalintii [More ...]
Ansixinta ayaa timid Tramka wuxuu kusii kordhiyaa Çiğli
Wasaaraddu waxay ansaxisay mashruuca xNUMX kiilomitir kiiloomitir ee 11, kaas oo si weyn u fududayn doona gaadiidka gobolka Çiğli ee İzmir. Mashruucu wuxuu ku dhici doonaa laba marxaladood. 250 waxaa la filayaa inuu ku kici doono milyan ginni. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, [More ...]
CHP Adana Kuxigeenka Att. Elif Dogan TURKMEN, sida loogu dabaqo da'da 65, ardayda waa inay bilaash ku ahaadaan gaadiidka magaalada, ayuu yiri. Bilowga sanad dugsiyeedka [More ...]
Nabdoonaanta Shaqada, kaalmada koowaad iyo tababarka dab damiska waxaa lasiiyay shaqaalaha Ankara ee Magaalo Weynta Magaalada Ankara EGO General Directorate waxa ay tahay in la sameeyo inta dababka basaska la demiyo iyo qaababka baabi'inta iyo jahawareerka iyo gubashada. Metropolitan [More ...]
Muwaadiniinta isticmaalaya khadka tareenka ee Kartal-Kadıköy ee Istanbul ayaa ku caasiyey burburka iyo xoogeysiga tareenka dhulka hoostiisa. Waxaa la bartay in rakaabku ay sugaan nus-saac adeegga tareenka sababta oo ah guuldaraysiga. Ku dhawaaqida lagu sameeyay dhulka hoostiisa [More ...]
Mashruucyada Sivas iyo Afyon YHT waxaa lagu dhammayn doonaa 2019
Shirka Xisbiga AK Party ee degmada Mamak ayaa la qabtay iyadoo ay ka soo qaybgaleen raysal wasaare Binali Yıldırım iyo duqa magaalada Ankara Melih Gökçek. Raiisel wasaare Yıldırım, AK Party 6. Shirweynihii degmada Mamak ee khudbadiisa, ee xisbiga AK Party [More ...]
DEMOK waxaa loo dhiibay Erkenekli
Isweydaarsiga Isku Xirka Iskaashatada Xirfadaha Iskuullada Xirfadaha Is-weydaarsiga (DEMOK) Malatya Laange waxay doorteen maamulka sannadlaha ah ee 3. Isweydaarsiga Ururka Iskuullada Xirfadaha Iskuullada Xirfadaha Iskuullada (DEMOK) Malatya Laanta 10. Golaha Guud ee caadiga ah TCDD 5. Agaasinka Qoyska ee Taleex [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiintu waa shardi u ah jaamacadda Cumhuriyet
Guddoomiyaha Ururka Xuquuqda Shaqaalaha Gaadiidka iyo Tareenka, oo ku adkeystay in mashruuca ay soo saareen ee nidaamka tareenka ay tahay in la hirgaliyo. Abdullah Peker, nidaamka gaadiidka xadiidka ee Sivas ayaa xallin doona dhibaatada, ayuu yidhi. Peker [More ...]
Iskudhinta Tramways waxay kordhisaa Awoodda rakaabka
Maamulayaasha guud ee Korontada ayaa diyaarin doona jet diyaar gareynaya halkii ay diyaarad gaar ah lahayd
General Electric (Newburgh) wuxuu go’aansaday inuu dego dhamaan dayuuradihiisa ganacsi dhulka. Shirkadda waxay dooneysaa inay yareyso qiimaha diyaaradaha qaarkood si ay u kireeyaan shirkadaha isgaarsiinta si ay u iibiyaan qaar ka mid ah kuwa duubtay. Jets oo ka mid ah duullimaadyada shirkadda [More ...]
Dhismaha Saldhigga Dhexe ee İstoç Central Warehouse
2017-2018 oo la bilaabay bilowga xilliga waxbarashada iyo tababarka Kocaeli Magaalo Weyn, 17 kun 500 dhimis kaarka ardayda magaalada ayaa loo abaabulay. Marka lagu daro kaararka magaalada ee dhowaan la soo saaray, hadda kaararka 25 kun ee magaalada ah ee jira [More ...]